PC အတွက် Clash Royale ကို Download လုပ်နည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
PC အတွက် Clash Royale ကိုလုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါ
Jesus Sanchez | | အားကစားပြိုင်ပွဲ
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည့်အဘယ်ဂိမ်းအကြောင်းပြောနေသည်ကိုသင်သေချာပေါက်သိနိုင်သည် Royale ထိပ်တိုက်တွေ့…ပြီးတော့ပုံမှန်ပါပဲ၊ အဲဒါဟာ Android နဲ့ iOS စမတ်ဖုန်းတွေအတွက်အကျော်ကြားဆုံးနှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒီ post မှာတော့မင်းတို့ပြမယ် Clash Royale ကိုသင်၏ PC တွင်လည်းအခမဲ့ကစားနိုင်သည်.
သင်၏ကွန်ပြူတာမှ Clash Royal ကိုအဆင်ပြေစွာကစားနိုင်အောင်အဆင့်ဆင့်ကိုသင်ပေးပါမည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်း၏ဘက်ထရီတစ်ခုလုံးကိုကစားရန်မလိုတော့ပါ ဒီဂိမ်းများကိုရန်။
1 Clash Royale ကဘာလဲ
2 PC ပေါ်မှာ Clash Royale အခမဲ့ download လုပ်နည်း
2.1 Clash Royale ကိုကွန်ပျူတာတွင်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်။ မရပါ
2.2 သင့်ကွန်ပျူတာအတွက် Android emulator ကို download လုပ်ပါ
2.2.1 emulator ဆိုတာဘာလဲ။
2.2.2 MeMu Player ကိုဘယ်လို download ချရမလဲ
2.2.3 Bluestacks ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်နည်း
3 ငါ့ကွန်ပျူတာက emulator ကိုထောက်ပံ့မလား။ လိုအပ်ချက်များ
4 ကျွန်ုပ်၏ PC တွင် Clash Royale ကစားနည်း
5 ကျွန်ုပ်၏ PC တွင်အခမဲ့မိုဘိုင်းဂိမ်းများကိုကစားနိုင်ပါသလား
6 Clash Royale ကိုကစားရန် emulator ကိုသုံးခြင်းသည်တရားဝင်ပါသလား။
6.1 emulator တစ်ခုသုံးတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အကောင့်ကိုဖျက်လို့ရလား။
Clash Royale ကဘာလဲ
ဒါဟာရှည်လျားတဲ့ရိုက်ချက်ဖြစ်ပေမယ့်သင်ဒီဂိမ်းကိုမသိသေးဘူး။ Clash Royal ကဘာမှမထူးရင်၊ မင်းတို့ကိုတိုတိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်။
Royale ထိပ်တိုက်တွေ့ ၎င်းသည် Android နှင့် iOS ကိရိယာများအတွက်ဖန်တီးထားသည့်အွန်လိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်တူညီသည်၊ ၎င်းကိုဂူဂဲလ်ပလေးနှင့် Apple စတိုးတွင်သာကူးယူနိုင်သည်။ ဒါဟာဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုပါ အလွန်ဖျော်ဖြေမှုအစစ်အမှန်အချိန်မဟာဗျူဟာ ယခင်ဂိမ်း Clash of Clans မှဇာတ်ကောင်များကိုအခြေခံသည်။
ဂိမ်း ကဒ်ဂိမ်းနှင့်မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးဒြပ်စင်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ စစ်မှန်သောအချိန်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်များ၏စစ်သည်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်ကတ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်ကောင်များကိုရွေးချယ်ရလိမ့်မည်။ သူတို့၏မျှော်စင်များကိုဖြိုချခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှုံးနိမ့်ရမည်။ ကျနော်တို့မှာကောင်းမွန်တဲ့ကာကွယ်ရေးနှင့်တိုက်ခိုက်ရေးဗျူဟာရှိရမည်။
PC ပေါ်မှာ Clash Royale အခမဲ့ download လုပ်နည်း
Clash Royale ဆိုတာဘာလဲ၊ ဒါမှမဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့စာပိုဒ်ကိုကျော်ပြီးသွားပြီဆိုတာသိပြီဆိုရင်ငါတို့အားပြပါလိမ့်မယ် ဗွီဒီယိုဂိမ်းကို PC အတွက်အခမဲ့ download လုပ်နည်း။ အဆင့်များ။
Clash Royale ကိုကွန်ပျူတာတွင်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်။ မရပါ
သတင်းဆိုးဆိုး ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့မင်းကိုမင်းစိတ်ပျက်အောင်မလုပ်မိအောင်မင်းတို့လုပ်နေတာ။ ဆက်ဖတ်, အက်။
သင့်ကွန်ပျူတာအတွက် Android emulator ကို download လုပ်ပါ
Clash Royale သည်မူလကမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင်ကစားရန်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်၎င်းကိုကစားနိုင်ခြင်းမှတားဆီးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ကျွန်ုပ်တို့ Android emulator ကို download လုပ်၍ install လုပ်ရမည် သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ။
နာမည်အားဖြင့်မကြောက်ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်ပါ။ emulator တစ်ခုသည်ရိုးရှင်းပါသည် Android mobile မှာမြင်ရမယ့်အရာတွေကိုမြင်ရမယ့် virtual machine တစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသည်လျှောက်လွှာတစ်ခုမှတဆင့်Smartရာမစမတ်ဖုန်းဖြစ်လာသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
အများအပြားရှိပါတယ် Android emulatorsငါတို့သည် MeMu ကစားသမား, BlueStacks, Nox App ကို Player ကို o အန်ဒီ Emulator။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များ emulators ဖြစ်ကြသည် MeMu ကစားသမား y BlueStacksဒါကြောင့်သူတို့ကိုဘယ်လိုအခမဲ့ download ဆွဲမလဲဆိုတာကိုပြပေးပါမယ်။
MeMu Player ကိုဘယ်လို download ချရမလဲ
MeMu ကဒါကို Android emulator ပဲ နောက်ထပ် Windows application တစ်ခုအနေဖြင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ MeMu သည်အလွန်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးသင်၏ PC တွင် Clash Royale ကိုကစားရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် ဒီအဆင့်တွေကိုလိုက်နာရမယ်။
ကျနော်တို့ဝင်ရောက်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် MeMu Player ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် emulator ကို download လုပ်ပါ.
ကျနော်တို့ emulator ကို install ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့က run ပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမေးဖွယ်ရှိသည် အကောင့်ထပ်တူပြုခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ဂူဂဲလ်ကိုဝင်ရောက်ပါ သို့မဟုတ်အကောင့်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးပါ။
အတု၏အဓိကမျက်နှာပြင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် Android application များ၏ catalog တစ်ခုလုံးကိုရယူပါ။ Clash Royale ကိုရှာပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
ငါတို့ Clash Royale နဲ့ voila ကိုစလိုက်ပြီ၊ ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းကိုငါတို့ပျော်မွေ့နိုင်ပြီ။
Bluestacks ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်နည်း
ကျနော်တို့ emulator ကိုဖွင့်ကြည့်ပါလိမ့်မယ် ငါတို့ရဲ့ PC မှာဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ Android application အားလုံး။ Clash Royale ကိုရှာပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
Clash Royale နှင့် voila တို့ကိုစတင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးကဒ်များဖြင့်ကစားနိုင်သည်။
ငါ့ကွန်ပျူတာက emulator ကိုထောက်ပံ့မလား။ လိုအပ်ချက်များ
Bluestacks နှင့် MeMu ကဲ့သို့သော emulators များသည်အလုပ်လုပ်ရန်မလိုပါ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်း။ Clash Royale ကိုနှစ်သက်ရန်အတွက်သင် NASA ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဂိမ်းကစား PC မလိုအပ်ပါ။
လိုအပ်ချက်များ emulators ကိုထောက်ပံ့ဖို့သင့်ရဲ့ PC အတွက် MeMu y BlueStacks နှင့်ပြေးအရည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြသည်။
operating system ကို: Windows7/ Windows 8 / Windows 10 ။
Processor ကို: AMD (x86) သို့မဟုတ် Intel ။
ရမ်: 1 GB အထိ။
အခမဲ့ hard disk နေရာ -2GB အထိ။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်: Windows7/ Windows 8 / Windows 10 ။
Processor ကို: 2GHz အမြန်နှုန်းပိုမို
အခမဲ့ hard disk နေရာ -4GB အထိ။
ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ မင်းမှာအင်အားကြီးတဲ့ကွန်ပျူတာမရှိရင်မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ် Memu၊ သင့်ကွန်ပျူတာသည်အစာရှောင်လျှင်တောင်သင်ဤэмуляစက်ကိုဆက်အသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ PC တွင် Clash Royale ကစားနည်း
Clash Royale ၏ကွန်ပျူတာသည်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မည်သို့မည်ပုံကစားနေသည်ကိုသင်တွေးမိပါကစိတ်မပူပါနှင့်။ အရမ်းရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်သင့်ကုန်ကျမည်မဟုတ်။
သင့်ကွန်ပျူတာမောက်စ် သင်၏လက်ချောင်းကဲ့သို့အလုပ်လုပ်လိမ့်မည် ကြွက် ၎င်းသည်သင်၏လက်ချောင်းဖြင့်မြင်ကွင်းကိုထိခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အလို့ငှာ စာတစ်စောင်ချလိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆွဲနေစဉ်ကလစ်ကိုရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုနှိပ်ပါ။ လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးမိသားစုတစ်စုလုံးအဘို့။
ကျွန်ုပ်၏ PC တွင်အခမဲ့မိုဘိုင်းဂိမ်းများကိုကစားနိုင်ပါသလား
အဖြေဖြစ်ပါသည် ဟုတ်ကဲ့, MeMu သို့မဟုတ် Bluestacks emulators နှင့်အတူ \_ t Google Store နှင့် Apple Store မှမည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်မည်သည့်လျှောက်လွှာကိုမဆိုအသုံးချနိုင်ခြင်းအပြင်။ ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြမယ် ပို့စ်တင်မယ် PC အတွက်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးအက်ပ်ကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်း InShot ။
တစ်ခါတစ်ရံဂိမ်း၏လိုအပ်ချက်များကြောင့်၎င်းတို့ကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကစားခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။ နှင့်အခြားအခါသမယများတွင်, ခဏယူရန်, ငါတို့စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာသူတို့ကစားရန်ပိုနှစ်သက်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတတ်နိုင်သမျှလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ပြီးပြီ။
Clash Royale ကိုကစားရန် emulator ကိုသုံးခြင်းသည်တရားဝင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်ဒါတရားဝင်ပါ Clash Royale နှင့်အခြားဂိမ်းများကိုကစားရန် Memu သို့မဟုတ် Bluestacks ကဲ့သို့သော emulator ကိုသုံးပါ။ ဒါပေမယ့်ဂိမ်း developer (SuperCell) ကသတိပေး:
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ Clash Royale ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့) ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လုံးဝအခမဲ့ကစားလိုပါက၊ ဖြစ်နိုင်ခြေမည်မျှဝေးဝေးနေပါစေ၊ ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ခြေရှိသည်ဟုသင်ယူဆသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အားကစားပြိုင်ပွဲ » PC အတွက် Clash Royale ကိုလုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါ
တရားဝင် DAZN ကိုမည်သို့ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း